China FOTON BJ6802 / BJ6902 fekitori uye vagadziri | Foton
8-9M DZAKATEVEDZANA KOCHI
Foton BJ6802 / BJ6902 akateedzana murairidzi iri rakakwidziridzwa vhezheni ye Foton bhazi yakakura chigadzirwa. Yakagadzikana, yakagadzikana, ine simba, inoshanda zvakanyanya uye inochengetedza simba. Inopa inoshanda, inogara kwenguva refu, yakachengeteka, yakasikwa uye inokodzera mhinduro-yekutakura vafambi.
Kunopindirana Dimension 8995 * 2450 * 3300
Kurambidza Kurema 9.1T
Kugara Kugona 35 + 1
Foton BJ6802 / BJ6902 akateedzana murairidzi iri rakakwidziridzwa vhezheni ye Foton bhazi yakakura chigadzirwa. Yakagadzikana, yakagadzikana, ine simba, inoshanda zvakanyanya uye inochengetedza simba. Inotaridza chimiro chine fashoni uye chakashongedzwa, yakasarudzika yemukati trim, ichipa mufambi akachengeteka uye anonakidza ruzivo rwekufamba.
BJ6802 / BJ6902 inoyevedza ine yakanyanya-inoshanda dhiraini uye mafuta-anoshanda powertrain. Kuwedzera kweinjini kuita pamwe nekushandisa kwakaderera; yakakura nzira yehunyanzvi kubva kune yakawanda inoshanda eperience.